March 2017 – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
संविधान संशोधनमा लचकदार हुन, एमाले मधेशी नेताले आफ्नो नेतृत्वलाई दबाब दिए,
March 30, 2017 March 30, 2017 सरोकार संवाददाता
इसरोकार संवाददाता १७ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका २ नम्बर प्रदेशका कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याकै आधारमा हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार र बिहीबार महोत्तरीमा आयोजना गरिएको दुई नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ताको अगुवा भेलामा सहभागी प्रदेशका नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयकमा पार्टीले लिएको अडानका बारेमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सीमांकन हेरफेर, भाषा र नागरिकताको सवालमा पार्टीले लिएको नीति सही भए पनि राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याकै आधारमा हुनुपर्ने एमालेका मधेसी नेता कार्यकर्ताहरुले सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए । एमालेले राष्ट्रियसभामा प्रदेशहरुबाट समान संख्यामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने…
बाबुरामको नयाँ शक्तिद्वारा ६ बुदे सर्त अघि सारे,
इसरोकार संवाददाता चैत्र १७, काठमाडौं, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि भन्दै सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव गरेको छ । राजधानीमा म‌ंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय परिषद्को बैठकपछि जारी गरिएको निर्णयमा पार्टीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको गरी तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्नेसहित छ वटा सर्त अघि सारेको छ । नयाँ शक्तिका ६ बुँदे शर्तहरु १. संविधान संशोधन मार्फत थारु, मधेशी, आदिवासी जनजातिका मागको सम्बोधन २. विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र सहितको राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना ३. प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल…
हरिबंश आचार्य चढेको गाडीलाई सार्वजनिक बसले ठक्कर,
इसरोकार सम्वाददाता चैत १७ काठमाडौं, कलाकार हरिबंश आचार्यको गाडीलाई सर्वोच्च अदालतअघि ठक्कर दिएको छ। बिहिबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतअगाडि एक पैदल यात्रुले बाटो काट्ने क्रममा आचार्यले गाडी रोकेका थिए। पछाडिबाट बत्तिएर आएको भक्तपुर ठीमी चल्ने यात्रुबाहक बसले उनको गाडीलाई ठक्कर दियो। ठक्करबाट गाडी क्षतिग्रस्त भएको तर, आचार्य स-कुसल रहेका छन्। गाडीको मर्मत सम्हार बस सञ्चालकले गरिदिने भएको छ।
इमर्जिंग टिम्स एसिया कपमा, नेपालले हङकङलाई ७ विकेटले हरायो,
इसरोकार संवाददाता काठमाडौं, चैत १७ – इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले हङकङलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ । २ सय १५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ४४ अोेभर २ बलमा तीन विकेट जाँदा २ सय २० रन बनाएको हो । नेपालका ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धसतक बनाए । दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ८३ बलमा ६० रन बनाए । उनले ५ चाैका र १ छक्का हाने । शरद भेषावकरले ४८ बलमा ५३ रन बनाए । उनले ३ छक्का ३ चौका हानेका थिए । नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ११ चौकाको मद्धतमा ८२…
ट्रंपले आफ्नो छोरीलाई सहायक बनाउने पक्का भयो,
चैत्र १७, २०७३- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छोरी इभान्कालाई आफ्नो सहयोगी बनाउने भएका छन् । ह्वाइट हाउसले जनाएअनुसार इभान्का बेतलबीरुपमा राष्ट्रपतिकी सहायक बनेर काम गर्नेछिन् । ट्रम्पको यो कदमको नैतिकरुपमा ठीक नभएको भन्दै विरोध भएको छ । ज्वाइं जेर्ड कुश्नरलाई यसअघि नै ट्रम्पले आफ्नो वरिष्ठ सल्लाहकार बनाइसकेका छन् । यसअघि नै इभान्कालाई राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसमा बस्ने गरी कार्यालय दिइएको छ l
Slider, अन्तराष्ट्रिय, राजनीति
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नया शक्ति पार्टी बीचको एकिकरण अन्तिम चरणमा,
इसरोकार संवाददाता १७ चैत, काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नया शक्ति पार्टी बीच स्थानीय चुनाव अघि नै पार्टी एकता गर्ने पहल सुरु भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताका लागि लगातार सम्वाद भइरहेको छ । नयाँ शक्तिको वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र झाले पार्टीको बैठकमा चुनाव अघि नै पार्टी एकता हुने संकेत दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को बैठकमा झाले वैशाख १ गते पार्टी कार्याकर्तालाई नयाँ वर्षको उपहारका रुपमा संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता हुने बताए । बैठकमा सहभागी…
नेपालले पायो २१५ रनको लक्ष्य,
इसरोकार संवाददाता १७ चैत, काठमाडौं । एसीसी इमर्जिङ कपमा हङकङले नेपालसामू २१५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । नेपालले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ थाल्नेछ । टस हारेर ब्याटिङ थालेको हङकङले ५० ओभरमा १० विकेट गुमाएर १२४ रन बनायो । हङकङको सुरुवात निकै राम्रो थियो । नेपालले २० ओभरसम्म विकेट नै लिन सकेन र क्यामरन म्याकुलसन र अन्शुमान राथको पहिलो विकेटका लागि ९५ रनको साझेदारी गरे । तर, पार्टटाइम बलरको भूमिकामा रहेका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले हङकङको महत्वपूर्ण विकेट लिए । २०.६ ओभरमा अन्शुमानको विकेट लिएका उनले २२.२ ओभरमा क्यामरन म्याकुलसनलाई पभेलियनको बाटो…
सद्भावना पार्टी परित्याग गरि केन्द्रीय सल्लाहकार तथा सहमहामन्त्री सहित १५ सय नेता संघीयसमाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गर्ने तयारी,
इसरोकार संवाददाता सिरहा, चैत १६ –राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीको सिरहामा ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित ठूलो समूह उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा जाने तयारी गरेको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री राजु गुप्ताको नेतृत्वमा १५ सय जना नेता तथा कार्यकर्ता सो फोरम नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको बताइएको छ । साथै रौतहटमा पनि सो पार्टीबाट ठूलो सँख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता फोरम नेपालमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । सहमहामन्त्री गुप्ताले आज साँझ इसरोकार सँग कुरा गर्दै भने, मलगायत पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार रामबल्लव साह र पीबी…
इमर्जिङ टिम्स एसिया कप : आज नेपाल भर्सेस हङकङ
चैत १७ – इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा बिहीबार नेपालले हङकङसँग खेल्दैछ । खेल नेपाली समय अनुसार बिहान पौने ९ बजेपछि बंगलादेशको कक्स बजारमा सुरु हुनेछ । यसअघिका दुवै खेल गुमाएको नेपालका लागि हङकङसँगको खेलमा प्रतिष्ठाका लागि मात्रै हो । नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानको २३ वर्षमुनिको टोलीसँग ६ विकेटले हारेको नेपाल दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग ८३ रनले पराजित भएको थियो । हङकङसँगको खेल नेपाली क्रिकेटका लागि भने महत्वपूर्ण छ । एक दिवसीय खेलमा नेपाल र हङकङको यो दशौं भेट हो । यसअघिका ९ खेलमा नेपालले ५ खेल जितेको छ भने चार…
पाकिस्तानका फास्ट बलर इरफानमाथि एक वर्षको प्रतिबन्ध
चैत १७ – पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर मोहम्मद इरफानमाथि एक वर्षको प्रतिबन्ध लागेको छ । म्याच फिक्सिङ अर्थात खेल मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोपमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले इरमानमाथि एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएका हो । पाकिस्तान सुपर लिगको क्रममा च्याच फिक्सिङ गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इरफानमाथि प्रतिबन्ध लागेको हो । यो घटनामा उनीसँगै शरजिल खान र खालिद लातिफमाथि पनि प्रतिबन्ध लागेको छ । पिएसएलमा तीनै खेलाडी इस्थानबुल युनाइटेडबाट खेलेका थिए । इरफानले १० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । थप आरोप नलागे र भ्रष्टाचार विरुद्धको कक्षामा सहभागी भएमा इरफानमाथिको…